RAVELOSON CONSTANT : Roahinay amin’ny fifidianana Rajoelina – MyDago.com aime Madagascar
RAVELOSON CONSTANT : Roahinay amin’ny fifidianana Rajoelina
Zavatra roa no nambaran’ny Ct Raveloson Constant teny amin’ny Magro Behoririka. Ny voalohany dia momba ny vahiny rehetra izay tsy ry Chissano ihany fa ireo ambasadaoro eto amintsika, ny faharoa dia mahakasika ny fifidianana, fampandaniana an’ny kandidà Lalao Ravalomanana. Momba ny vahiny dia nambarany fa nandalondalo nanao famaizana ry Chissano talohan’ny nialany tany amin’ny misy azy tany. Rehefa tonga eto hoy izy dia izao no tenin’ny vahiny hafa, ny filoha Tanzaniana nanoratra tamin-dRajoelina talohan’ny nanombohan’ny fampihaonana nataon’ny FFKM. Zavatra mety ny ataon’ny FFKM ary mankasitraka izahay hoy io filoha io, nandefasan’ny FFKM dika mitovy tany tamin’ny taratasy nalefan’ny FFKM ho an’ny filoha Ravalomanana. Koa mampatsiahy ahy ny tsy niresahantsika izao fiangaviana izay fa aoka ianao anao izay hahatafody ny filoha Ravalomanana, mba azo antoka ny fiarovana ny ainy sy ny fananany, mba ho olon’afaka sy malalaka amin’ny fiainana ary afaka mifampidinika amin’ny fifampiresahana. Rehefa hoe tena hifampiraharaha hoy Constant dia miantoka azy aho ary manao izay tsy hahatohitohina azy. Ny safidin-dRajoelina hoy izy dia mampangina an’i Christine, fa mahamenatra izany hoe vahiny milaza amin’ilay Malagasy iray izay hifampiraharaha hoe arovanao izy. Ireto mandrangaranga famaizana ireto hoy ity mpanao politika ity dia izao no tenin’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana, vonona aho handalo izay fisedrana izany raha toa ka izay no mahatonga ahy ho fidiana hotsarain’ny vahoaka ho filoham-pirenena. Fitsapana mendrika ho diaviko izany hoy izy. Ny vahiny hafa eto amintsika toy ny ambasadaoro amerikana hoy Constant dia niteny tamin’ny 3 Jolay hoe avelao hahalalaka ny fifidianana, avelao hirotsaka ny olona. Izaho kosa hoy Constant dia miteny hoe vitanay ry amerikana ny hanapahan-kevitra amin’ny fifidianana ary roahinay amin’ny fifidianana Rajoelina. Rehefa ohatra ry Chissano hoy izy matimatin’ny zavatra hafa nivadika amin’ny voninahitry ny mpanelanelana , niditra niaro an-dRajoelina dia izao arovy ary izy ary avelao ho kandidà na dia nanosihosy anareo teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena , na dia nandika ny lalàna iraisam-pirenena aza fa nanongam-panjakana. Ekenay hoy izy Rajoelina hirotsaka fa dakany amin’ny fifidianana. Raha ny anay tsy nanota teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena hoy izy no kitikitihana dia tsy fanelanelanana intsony izany fa efa fiadaniana. Ny vahiny iray kosa hoy ity olomboantendry ity dia tsy henoheno tato ato dia Gold Blatt izany. Amin’ny isika mitenyizao hoy izy dia tsy voatery isika Malagasy no niteny fa ny frantsay eto Madagasikara no efa niteny izao hoe manaonao foana Goldblatt manjary izahay frantsay eto an-toerana no mitsingilahila amin’ny toeranay noho ny ataony.Mahakasika ny samy Malagasy dia nambarany fa raha nahatsikaritra ianareo dia vao nanomboka nihetsika ny FFKM dia mba nihetsika ihany koa ny CSC. Ny tena andraikiny anefa dia ny hanaramaso mijery ny fampiharana ny tondrozotra . Kanefa aiza izy amin’ny fampiharana ireo andininy marobe, indrindra ny andininy faha 20. Fa maninona no tsy niresaka izany ny tao amin’ny Panorama.Tsy nisy ny maha CSC azy tao fa mpiandany tanteraka amin’ny mpanongam-panjakana.Raha amiko dia tsy misy vidiny intsony ny CSC.Efa mandika lalàna izy matoa manery hoe ovana ny CES. Tsy te hanao fifidianana hoy Constant ny CSC fa manao izay hitondran-dRajoelina eo. Matahotra fifidianana izy satria efa nipatitaka ny Tgv ary samy te ho lohany avokoa. Izany no nahaotonga azy hizirizizy tsyhiala na dia efa kandidà aza. Etsy andanin’izay hoy izy dia mbola mivohy sy manakarama olona mihitsy izyhivohy mba ny fifidianana solombavam-bahoaka no handeha aloha.Tsotra ny antony dia ny hahafahany mampiasa fitaovam-panjakana mba hahazoana solombavam-bahoaka maro hiara-hitondra aminy. Rehefa maro hoy Constant ry zareo dia afaka manova sy mamorona karazana lalàna mba hipetrahan-dRajoelina maharitra eo. Ny fanafodiny dia rehefa tsy hiala Rajoelina dia esorintsika amin’ny fifidiananna. Dinga goavana io fifampiresahan’izy efatra mirahalahy io. Ilaina ihany koa ireto jeneraly ireto mba hahalala menatra.Iray tsikombakomba amin’izay olona te hisotasota amin’ny filoha Ravalomanana ny jeneraly Rakotoarimasy.
RAVELOSON CONSTANT : TSY MISY MANAIKY FIFIDIANANA ETO KA RAJOELINA NO HITANTANA NY VOLAM-PANJAKANA
RAVELOSON CONSTANT : NITSIDIM-PASANA RAJOELINA
RAVELOSON CONSTANT : KARAKARAO FA MIVORAKA RAJOELINA
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 juillet 2013 12 juillet 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : Roahinay amin’ny fifidianana Rajoelina”
les povcons et Rajoelina filtrent le Forum moov ,pour le faire une manipulation intellectuelle.
11 juillet 2013 à 19 h 19 min
Ny fanambarana natan’ny Ambassadeur américain E.WONG dia mikasika zavatra roa loha lehibe ;
-ny tsy maintsy hanaovana fifidiana démocratique ( mahazo milatsoa=ka izay eken’ny Làlana ilatsaka ), malalaka ( tsy misy fanerin-trena na avy aiza izany na avy aiza ,indrindra moa fa ny fampitahorana ny tsy fanomezana fanampiana ) ,mazava (tsy maintsy dia mpiritaka eo amin’ny vahoka ny vaovao sy ny adi-hevitra ,noho izany dia tsy maintsy sokafana ireo haino aman-jery no tapenam-bava),madio ( tsy misy fampihororoana , tsy miaramila na zandary na polisy mitam-basy manodidina ny bureaux de vote )..
-ny tsy fandraisan’ny Amerikanina anjara ao amin’ny fivorana ataon’ny SADC , dia tsy mitory fa tsy mandray andraikitra ny Amérikanina momba ny fitadiavana vaha -olana..
Vakio tsara io fanambaran’ny Ambassadeur américain E.WONG tamin’ ny 03 juillet teo !
Ary raha mzoto ianao dia vakio koa ny kabarin’ny Président OBAMA tany Cape Twn ho an’ny Afriqque !
Manao izay hefany ny Amérikanina ary mitsilana sy manohitra ny fanesorana ireo candidats telo lazaina fa mianaraka amin’ny fepetran’ny CES..Ny CES anefa namoka didy fa mahazo milatsaka ho fidiana ireo candidats teo ireo…! Ary ny Américains dia tsy mba nanao chantage toa ny hoe ;raha mandray anjara amin’ny fifidianana ireo candidats telo ireo , dia tsy hanome fanampiana rizareo !
Ireo manao chantage dia Firenena mahantra sahala amin’i Madagasikara.., koa ahoana moa hafahany manampy antsika ara-bola ,
Ary ny trantsay sy ny UE (Firenene vitsy )dia izy ireo ve dia hahavita miady amin’ny fakam-panahy tsy hvidy ireo harentsika izay robainy ankehitriny..
Koa Isika tsy hanaiky ny didy jadona , na hatahotra ny fandrahonana..!
11 juillet 2013 à 20 h 27 min
Ireo firenena vitsy ireo no mbola tsy fantatro raha azonao lazaina azafady.Misaotra mialoha.
12 juillet 2013 à 16 h 15 min
Ilaina fanohenrana mazava ireo vahiy ireo fa tsy ny SADC ihitsy no ratsy fa ireto ekipa ireto dia efa voavolavolan’ny frantsay @ hanambakana lalan-dava an’i Afrika indrindra i Madagasikara. Ny fidinana an-dalamba milaza ny tsy tokony hanakanan’ny SADC ny oloba tiana’ny Malagasy fidiana hitondra azy no atao.
Atao sora-baventy hoe SADC used by France. Madagascar has his oewn right to choice his own president. C.I don’t respect Madagascar sovereignity.. Atao @ teny anglisy mihtsy mba ho hitany.
Ary hanaovana conference de presse ihany koa, fa indrindrindra lazaina mivantana @ ireo vahiny imasomaso ny tsy fanakebna ny fanaoan’izy ireo izay manakorotana ny fiaian’ny Malagasy 22 tapitrisa.
13 juillet 2013 à 22 h 44 min
ho an’i Ratsimilaho ,
Ao amin’ny Union Européenne dia misy firenena 28 ankehitriny ary ireo firenena ireo dia misy mahalala izany Madagasikara izany ary lavitra amin’izy ireo ny mihevitra ny loza amana’atambo iainantsika..Mety ho vitsy izy fa ny tena marina dia tsy manan-danja izy ireo ,maivana , eo amin’ny fanapahan-kevitry ny Union Européenne..
Mbola tsy naheno ny iray amin’izy ireo aho niteny zavatra momba an’i Madagasikara !
Précédent Article précédent : DECLARATION DE LA MOUVANCE RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : FFKM : RAJOELINA sy BERIZIKY no MIBAIKO ny miaramila